Raasamaalka Beesha Shuraakada ah
Bangigan aan faa'iido doonka ahayn, oo hore loogu yeeri jiray Sanduuqa Maalgelinta Capital Capital, wuxuu maalgeliyaa oo la taliyaa ganacsiyada yaryar iyagoo isticmaalaya xalal ku saleysan suuqa si loo xoojiyo gobolka Appalachian iyo ilaalinta kheyraadka dabiiciga ah.
$ 2 milyan deyn 10 sano ah 2%; laga soo bilaabo sannadka 2015
Lacag raqiis ah oo loogu talagalay deymaha si loo dhiso ganacsiyada yaryar ee bulshada iyo kuwa masuulka ka ah ee Appalachia. Dadka ku nool gobolka ayaa ku jira khadadka hore ee is-beddelka dhuxusha ka soo jeeda dhaqaalaha hoose ee kaarboon gaaska waxayna u baahan yihiin gargaar dhaqaale oo farsamo iyo kuwo farsamo si loo dhiso dhaqaalo badan oo kala duwan
Sannadka 2016 NCIF waxay $ 8.4 milyan oo deyn ah ku siisay 35 shirkadood, 82% oo ka mid ah beelaha dhaqaale ahaan aan faa'iido lahayn. NCIF sidoo kale waxay bixisay 3,000 saacadood oo gargaar farsamo ah si ay uga caawiso macaamiisheeda inay ku raaxaystaan. Warbixinta 'Effect Report' ee NCIF ee 2016 hadda la heli karo.
Shaqooyinka la abuuray / lagu haysto shirkadaha firfircoon ee firfircoon iyo beeraha 705 3,886
Amaahda $ 8.41M $ 34.13M
Shirkadaha maalgeliya 169 208
Saacadaha adeegga la-talinta 3,009 17.111
Macaamiisha adeegyada talobixinta 150 924
McKnight waxay wax badan ka baraneysaa kala-guurka bulshada sida Xcel Energy-Minnesota ee ugu weyn ee adeegga- wuxuu xawaarayaa xiritaanka oo ka kooban laba qaybood oo waaweyn oo dhuxul-dhagax leh oo ku yaalla bartamaha Minnesota. Sannadka 2016-ka, waxaanu bilownay inaan la shaqeyno Sanduuqa Kaliya Kaliya iyo Hay'adda Initiative Foundation si loo xaqiijiyo deeqo dheeri ah oo Fudud oo Federaal ah oo loogu talagalay bulshooyinka dhirta saameeyey dhuxusha ee gobalka Minnesota si ay si wanaagsan ugu diyaargaroobaan kala-guurka dhaqaalaha.
Sawirka Sawirka: Bill Bamburger, oo madax ka ah NCIF